Iisoseji ezinesosi kunye neetapile zokubhaka | Ukupheka kweKhitshi
Iisoseji kwiwayini kunye neetapile
UMaria vazquez | | Ukupheka kwenyama, Iiresiphi ezilula
Ndiyazithanda iiresiphi ezilula; Ezo zenziwe ngezithako ezifikelelekayo kwaye kulula ukuzala kwakhona. Injalo nale recipe Iisoseji kwiwayini ngeetapile zokubhaka. Indlela eyahlukileyo yokupheka iisoseji ukomeleza imenyu yethu yeveki. Ngaba unesibindi sokuzama?
Kule recipe siza kuzama ukusebenzisa iisoseji ezintle ezilungiswe kwivenkile yakho ethenjiweyo. Esi sisiseko sale recipe egqityiweyo ngesosi yewayini ethambileyo kunye nezinye Iitapile ezibhakiweyo zilungiswe ngokukhawuleza ngokuvuthuza kwefry kunye ne-oveni, kunye ekugqibeleni. Isitya sosapho lonke onokuhamba nesaladi epheleleyo.
Ezi soseji zewayini kunye neetapile zokubhaka sisindululo esikhulu semini yakho. Enye indlela yokupheka iisoseji ukuze ungadikwa.
Iitapile ezinkulu ezi-2
Iisoseji ezi-4 kumntu ngamnye
½ iglasi yewayini emhlophe
½ iglasi yenkukhu yomhluzi
1 inqanaba lomgubo wepasipuni
ioli ye-oliva enyulu
Siyaxobula, sihlambe kwaye sisike iitapile zibe ngamaceke amancinci.
Kwipani yokupaka eneoli eninzi, siqhotsa iitapile ngaphezulu kobushushu obude kude kube yithenda. Ngexesha lenkqubo siyabafaka kwaye siyifefa nge-paprika. Sithatha kwaye siyeke ukuhambisa iphepha elifunxayo ukususa amanqatha amaninzi.
Kwenye ipani Siqhotsa iisoseji ngeetispuni ezimbalwa zeoyile yomnquma. Nje ukuba kuthiwe, siyabakhupha kwaye sigcine.
Kwipani enye uze udibanise umgubo kwaye siyipheka umzuzu ngaphandle kokuyeka ukuvusa.
Emva koko sidibanisa iwayini kwaye siyivumele ibe ngumphunga. Yongeza umhluzi kunye sinciphisa isosi imizuzu embalwa.
Sibeka iitapile ezigciniweyo kumsesane wesingxobo kwindawo esiza kuziphaka kwaye Sibhaka imizuzu emi-4 ngama-200 ° C.
Xa sele singaphandle, sidibanisa iisoseji kunye nesosi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » Ukupheka kwenyama » Iisoseji kwiwayini kunye neetapile
Iitshokholethi ezizaliswe ngecoat cookies